३ महिनामा ४ प्रतिशत खर्च- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
३ महिनामा ४ प्रतिशत खर्च
कार्तिक १४, २०७७ अमृता अनमोल
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ३ महिना सकिँदासम्म विकास बजेटको करिब ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुँदा खर्चको अनुपात र विकास उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजी बजेटको ४.४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । रकमका हिसाबले ८२ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रशासनिक खर्च भने दोब्बर बढी अर्थात् ९.६८ प्रतिशत भएको छ । रकमअनुसार १ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको यस्तो अनुपातले यस वर्ष पनि विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुने देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘त्यसले विकास योजनाको उपलब्धि देखाउन, खर्चको अनुपात मिलाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समयमा बजेट खर्च गर्न भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको थियो । तर धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयले नै विकास बजेट खर्चमा चासो देखाएनन् । जसले गर्दा लक्ष्य एकातिर तर परिणाम अर्कोतिर भएको हो । सचिवस्तरीय बैठकमा समेत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न र बजेट उपयोगमा लैजानेबारे छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए ।
‘हरेक मन्त्रालयका डिभिजन कार्यालयहरूलाई वर्षको सुरुवातबाटै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा गएको तर खर्च भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले कम खर्च देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।’ मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा कम विकास बजेट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । धेरै बजेट हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.०९ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २.१९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:०४
आईपीएल : प्लेअफ पुग्‍ने कसको सम्भावना कस्तो ?
कार्तिक १४, २०७७ एजेन्सी
अबुधाबी — कोलकाता नाइट राइडर्स र चेन्नई सुपर किंग्सबीचको खेल अगाडि इन्डियन प्रिमियर लिग २०२० मा सबै टिमले आफ्ना १२–१२ खेल खेलेका छन् । यो स्थितिमा पनि शीर्ष चार स्थानमा रहेर प्लेअफका लागि छनोट हुने टिमको ठ्याक्कै समीकरण तयार हुन सकेको छैन ।
मुम्बई इन्डियन्स बलियो स्थितिमा रहेको एक मात्र टिम हो भने चेन्नई सम्भावना सकिएको एक मात्र टिम । यस अर्थमा कसको सम्भावना कस्तो त ? समीकरण जटिल छ ।
मुम्बईको १२ खेलबाट १६ अंक छ र यो नै एक मात्र यस्तो टिम हो, जसबारे दाबी गर्न सकिन्छ, लगभग प्लेअफका लागि छनोट भइसकेको छ । मुम्बईले दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइज हैदराबादविरुद्ध खेल्न बाँकी छ । अहिलेसम्मको समीकरण अनुसार मुम्बई शीर्ष दुई मध्ये एक स्थानमा रहने छ, किनभने दिल्ली र रोयल च्यालेर्न्ज बेंग्लोरमध्ये एकै टिमको मात्र बढीमा १८ अंक हुन सक्छ । फेरि मुम्बईको नेट रनरेट पनि निकै राम्रो रहेको छ ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरका दुई बाँकी खेलमध्ये पहिलो सनराइज हैदराबाद रहेको छ भने अन्तिम दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध छ । उसको १२ खेलबाट १४ अंक छ । आफ्नो पछिल्लो खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग पराजित रहे पनि बेंगलोर आरामले शीर्ष चारमा पर्ने देखिन्छ । उसले यसका लागि अन्तिम दुई खेलमध्ये एकमा जित निकाले पुग्छ । दुवै खेलमा पराजित रहेको खण्डमा पनि बेंग्लोर १४ अंकमा कायम रहनेछ र यति बेला अरू टिमको नतिजा निर्णायक हुन सक्नेछ ।
मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरविरुद्ध रहेका छन्, दिल्ली क्यापिटल्सका अन्तिम दुई खेल । उसको १२ खेलबाट १४ अंक छ । सनराइज हैदराबादविरुद्ध ठूलो अन्तरको हारले दिल्लीलाई केही अप्ठ्यारोमा पारेको हो । फेरि उसका बाँकी दुई खेल पनि शीर्ष स्थानका टिमविरुद्ध नै रहेको छ, जुन पक्कै सजिलो हुने छैन ।
यसमध्ये एक खेलमा विजयी रहे पनि दिल्लीको छनोट सम्भावना कायम रहनेछ । यही १४ अंकले पनि दिल्लीलाई प्लेअफमा पुर्‍याउन सक्छ तर हैदराबादविरुद्धको जस्तो हार फेरि बेहोर्नु परे दाबेदार मानिएको टोली बाहिरिने छ ।
किंग्स इलेभेन पञ्जाब
किंग्स इलेभेन पञ्जाब पछिल्लो समय खुबै लयमा छ र यसै कारणले त हो, उसले पछिल्ला पाँच खेल लगातार जितेको छ । यो जितको क्रमलाई सात खेल पुर्‍याउने हो भने पनि पञ्जाब प्लेअफका लागि योग्य हुनेछ । पञ्जाबको १२ खेलबाट १२ अंक छ र उसको नेट रनरेट पनि राम्रो छ ।
पञ्जाब अन्तिम दुई खेल विजयी रहे पनि, त्यो जितको अन्तर निकै साँघुरो रह्यो भने समीकरण जटिल र अनिश्चित हुन सक्छ । दुई मध्ये एक खेलमा हारे पनि पञ्जाबको सम्भावना समाप्त भने हुने छैन् । पञ्जाबले पुछारको दुई टोली राजस्थान र चेन्नईसँग खेल्न बाँकी छ ।
सनराइजर्स हैदराबादका लागि प्लेअफ सम्भावनाको समीकरण स्पष्ट छ, उसले आफ्ना बाँकी दुई खेल जित्नु पर्‍यो, अनि आसमा रहनु पर्‍यो, १६ अंक छुन सक्ने पाँच टिममध्ये दुईले यस्तो आँकडा छुन नसकोस् । उसको नेट रनरेट पनि खासै नराम्रो छैन, त्यसैले यो हैदराबादका लागि सकारात्मक पक्ष हुनेछ । उसले आफ्ना अन्तिम दुई खेलमा बेंग्लोर र मुम्बईको सामना गर्नेछ । हैदराबादका लागि मुम्बईले बेंग्लोरलाई हराउनु राम्रो नतिजा रहेको छ । हैदराबाद अहिले १० अंकमा छ ।
राजस्थान रोयल्सको नेट रनरेट कमजोर छ, अझ नकारात्मक छ, त्यसैले सम्भवतः उसको सम्भावना अरूको तुलनामा कमजोर जस्तै छ । आफ्ना बाँकी दुई खेलमा उसको प्रतिद्वन्द्वी रहेको छ, किंग्स इलेभेन पञ्जाब र कोलकाता नाइट राइडर्स । अहिले उसको १० अंक छ । यदि राजस्थानको १४ अंक हुन्छ र नेट रनरेटको समीकरण आवश्यक परेन भने उसको छनोट सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यस अर्थमा राजस्थानले सबैभन्दा पहिले बाँकी दुई खेल नै जित्नु पर्‍यो ।
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:०१